मेडिकल कलेज / अस्पताल Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - बंगलादेशबाट डाक्टरी पढेका लाईसेन्स परीक्षामा फेल !
बंगलादेशबाट डाक्टरी पढेका लाईसेन्स परीक्षामा फेल !
बंगलादेश । बंगलादेशका निजि मेडिकल कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरु नेपालमा लिइने चिकित्सकीय लाईसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने क्रम बढ्दै गएको छ । साढे तीन महिनाअघि लिइएको एमबीबीएसको लाईसेन्स परीक्षामा बंगलादेश पढेका १ सय २१ जना सहभागी भएकामा ९२ जना फेल भएका थिए । परीक्षामा सफल हुनेको संख्या २१।३ प्रतिशतमात्र छ । यस्तै, १२ दन्तचिकित्सकले परीक्षा दिएकामा ९ जना फेल भएका थिए । आठ महिनाअघि लिइएको परीक्षामा पनि २ सय ७ सहभागी भएकामा ६१ जना फेल भएका थिए । नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएनका अनुसार बंगलादेशका मेडिकल कलेजमा करिब ५ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।	थप पढ्नुहोस्
स्वास्थ्य जाँच्न मेडिसिटी नै किन पुगे प्रचण्ड ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ललितपुर भैँसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पताल गएका छन । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा अध्यक्ष दाहाल अस्पताल जानुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि स्वास्थ्य जाँचका लागि विदेश जाने प्रचण्ड पछिल्लो पटक मेडिसिटी पुगेकाबारे विभिन्न चासो शुरु भएको छ । तर यसअघि नर्भिक र विदेशका अस्पतालमा जाँच गर्ने प्रचण्ड एकाएक मेडिसिटी किन पुगे ? चाँसोको विषय छ ।	थप पढ्नुहोस्
धनगढी । प्रा डा गोविन्द केसीले सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन । कैलालीको धनगढीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा केसीले कैलालीमा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सन्तोषजनक रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लामा पनि मेडिकल कलेज आवश्यक रहेको भन्दै डा केसीले भने, “डोटी वा डडेल्धुरामा पनि मेडिकल कलेज स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।” डा केसी बझाङमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश आएका हुन ।	थप पढ्नुहोस्
नेसनल मेडिकल कलेजको शुल्क १४ लाख बढी !
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल वीरगन्जले विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा १४ लाख बढी असुलेको पाइएको छ । नागरिकलाई प्राप्त विवरण र उक्त मेडिकल कजेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग गरिएको कुराकानीपछि यसको पुष्टि भएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
फेरिअनशन बस्ने डा. केसीको घोषणा, यस्ता छन् तीन माग
काठमाडौं । शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सहमति बमोजिमका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। उनले आफ्ना माग पूरा नभए २ पुसदेखि आमरण अनसन बस्ने समेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन । आज शिक्षण अस्पतालमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा डा केसीले निर्मला पन्तको हत्यारालाई मुद्दा चलाउन र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वय गर्न माग गरेका छन। डा केसीका मागहरु १. १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।	थप पढ्नुहोस्
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कालीकोटकी एक महिलाले पेटदेखि छातीसम्म शरीर जोडिएकी जुम्ल्याहा बालिकाको जन्म दिएका छन । रास्कोट नगरपालिका– ५ कालीकोटका २८ वर्षीय ललिता बुढाले आइतबार दिउँसो ३ः१५ बजे जुम्ल्याहा बालिकाको जन्म दिएकी हुन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट काजमा खटिनुभएका डा राजीव शाह नेतृत्वमा डा रवीन खातुङ, डा महेश पौडेल, शल्यक्रिया कक्षमा रहनुभएकी नर्स विनिता बस्यालसहितको चिकित्सकको संयुक्त प्रयासबाट शल्यक्रिया गरेर जुम्ल्याहा बालिकाको जन्म दिइएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
फेरी अनशन शुरु गर्ने डा.गोविन्द केसीको चेतावनी !
काठमाडौं । आफुसँग भएका सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले फेरी अनशन शुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई गैरकानुनी रुपमा अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्दै डा.केसीले अनसन शुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन । डा. केसीले प्रस्तावित काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई ३०० शश्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित नभएको लगायत आफुसँगका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनशन जुनसुकै बेला पनि शुरु गर्ने बताएका छन ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा विधाको मास्टर डिग्री इन जनरल प्राक्टिक्स एमडीजिपीको पठनपाठन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सो तहको अध्यापन शुरु गर्न भौतिक एवं शैक्षिक तयारी पूरा भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अमृत भण्डारीले सो तहको पठनपाठन शुरु गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति दिन मात्र बाँकी रहेको बताए । प्रतिष्ठानले यसअघि नर्सिङ विषयको स्नातक तहको प्रसूति मिडवाइफ सम्बन्धी अध्यापन शुरु गरिसकेको छ । सो विषयको अध्यापनअध्यापन हुनेमा सो प्रतिष्ठान तेस्रो रहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । बिहीवार सकिएको संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नु सरकारका लागि एकमात्र विकल्प भएको डा. गोविन्द केसी पक्षधरले बताएका छन्। विधेयकका प्रस्तुतकर्ता शिक्षामन्त्रीले भने कतिपय सांसदबाट त्यस्तो सुझाव आएको भए पनि अध्यादेशभन्दा हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउने विकल्प उचित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। डा. केसीले सो विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित नगरिए १६ ‌औँ पटक अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत शौरभ उप्रेतीको हत्या गरिएको आफन्तले दाबी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले प्रहरीले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको दाबी गरेको छ । मृतकका बुबा अर्जुन उप्रेतीले छोराको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरे । मृतककी आमा गोपिनी उप्रेतीले छोराका हत्यारालाई सरकारले कारवाही नगरेकामा दुःख व्यक्त गरिन । उनले प्रहरीले किटानी जाहेरी दिँदा पनि उजुरी दर्ता गर्न नमानेको बताएकी छन ।	थप पढ्नुहोस्